Van Dijk oo fariin qiiro leh u diray taageerayaasha Liverpool kaddib markii uu ku soo laabtay garoomada – Gool FM
(Liverpool) 30 Luulyo 2021. Daafaca Liverpool Virgil van Dijk ayaa fariin qiiro leh u diray jamaahiirta kooxda Reds iyo saaxiibadiisa, kaddib markii uu ku soo laabtay garoomada.
Van Dijk ayaa ka qeyb qaatay daqiiqado ka mid ah qeybtii labaad ee ciyaartii saaxiibtinimo ay la ciyaareen kooxda reer Germany ee Hertha Berlin, kaasoo ahaa kulankiisii ​​ugu horreeyay ee uu ciyaaro tan iyo markii uu dhaawac daran ka soo gaaray dhanka Jilibka bishii October ee la soo dhaafay.
Liverpool ayaa guuldaro la kulantay kulankii Hertha Berlin, kaddib markii looga adkaaday 4-3, ciyaartan ayaana qeyb ka ahayd kulamada isku diyaarinta labada kooxood ee xilli ciyaareedka cusub.
Haddaba ciyaarta kaddib Daafaca Liverpool Virgil van Dijk ayaa wuxuu fariin soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee Twitter-ka, wuxuuna yiri:
“285 maalmood kahor, safarkayga wuxuu bilaabay markale si aan u ciyaaro, way adag tahay in la muujiyo sida aan dareemayo, laakiin waxaa muhiim ii ah inaan sheego, waxaan dareemayaa nasiib inaan helo taageerada noocan oo kale ah oo ka timaadda dad badan oo cajiib ah, dhakhtarka qalliinka. dhakhtarka jimicsiga jirka, tababarayaasha, iyo shaqaalaha ila socday.”
“Maalintii koowaad, asxaabteyda waxay i siiyeen awood aan kor ugu sii qaado madaxayga, taageerayaashuna waxay i siiyeen jacayl, taageero iyo dhiirigelin.”
“La’aanta Qoyskeyga waxba ma noqdeen, mahadsanidiin, shaqadu ma joogsan doonto hadda, tani waa bilow, waxaan sii wadeynaa inaan horay u socono.”